Eglise Luthérienne Malgache de Paris, Synode Europe
Avis de decès » Dû à la crise sanitaire, la famille est contrain...
HERINANDRO MASINA » Fampianarana Soratra Masina (Enseignement biblique...
Zoom FLM Paris » "Izay mandinika ny teny no hahita soa; Ary izay ma...
Vaovao fanorenana Toby Pouru » Ary ataovy ny trano dia hankasitrahako izany, sady...
Fiaraha-mivavaka » "Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona, tahaka ny ...
Alahadin'ny Pastora » Tompoko, Miarahaba antsika mpianakavin’ny finoana...
Cellules de prière » "Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona, taha...
VOKA-DEHIBE 2020 » «Fa nitondran’i Abela kosa ny voalohan-terak’ondri...
FOTOAM-PIVAVAHANA » « Ireo dia hiady amin'ny Zanak'ondry, ary ny Zanak...
Bienvenue ! Enseignements Edito HAFATRA PENTEKOSTA
Écrit par Pasteur
Vendredi, 13 Mai 2016 17:09
"Fa ny Mpananatra, dia ny Fanahy Masina, Izay irahin’ny Ray amin’ny anarako, Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo." Jaona 14.26
Eo amin’ny Fiangonana kristianina dia misy vanim-potona telo lehibe izay ankalazaina : voalohany dia ny Krismasy na Noely, ny faharoa dia ny Paska ary ny fahatelo farany dia ny Pentekosta, izay hankalazaintsika amin’izao.
Tsy tongatonga ho azy ireo vanim-potoana telo lehibe ireo fa azo ambara fa tena planin’Andriamanitra izay mifandrify indrindra amin’ny asa lehibe nataony ho famonjena ny olombelona.
Taratra teo amin’ny vanim-potoana ny krismasy fa ny Ray no naniraka ny Zanany lahy tokana, ka nahafoy ny sarobidy indrindra teo Aminy, hanehoany ny fara-tampony amin’ny fitiavany (Jao.3 :16).
Teo amin’ny vanim-potoana ny Paska, dia ny fitiavan-dehibe tamin’ny nanoloran’i Jesosy Kristy ny Tena aman-dRàny, nisolo ny mpanota rehetra ka hanolorany famelan-keloka ho an’izay rehetra mino Azy. Nahafoy ny aina manontolo Izy mba ho fanavotana antsika (Efes 5 :2 ; Heb 2 :17).
Amin’izao vanim-potoanan'ny Pentekosta izao kosa dia tsahivina ny nidinan’ny Fanahy Masina, tonga nirahin’ny Ray sy ny Zanaka, hitari-dàlana ny olona ho amin’ny marina rehetra, dia ny amin’ny finoana an’i Jesosy Kristy, Ilay ivon’ny asa lehibe nataon’Andriamanitra. (Jao.14 :6)
Noho izany, ireo vanim-potona telo lehibe ireo dia maneho sy manambara amintsika ny amin’ny «TRINITE», Ireo Persona telo samihafa, nefa mikendry zavatra tokana dia ny famonjena ny olona mpanota izay very, ka mba hanany sy handovany fiainana mandrakizay, ary efa miatomboka amin’izao fiainana izao sahady.
Ny andro Pentekosta no asa farany ataon’Andriamanitra, ka izay manota amin’ny Fanahy Masina dia tsy misy famelan-keloka ho azy mandrakizay (Marka 3 :29), izany hoe mandà ny asany, izay mampihaiky heloka ny mpanota hibebahany ka hialàny amin’ny fahotana sy mandresy lahatra azy mba hino an’i Jesosy, handraisany famelan-keloka sy fanamarinana eo anatrehan’Andriamanitra.
Farany, ireto ny hafatra hosaintsainintsika mpino amin’izao andro farany izao :
1- "Aza manao izay mampalahelo ny Fanahy Masina" (Efs.4 :30),
2- "Aza mamono ny Fanahy Masina "(1 Tes.5 :19),
3- Dia mba ho toy ireo virjina dimy hendry nitandrina sy nikolokolo ny fanaovan-jirony sy ny afony (Mat. 25 :13).
Hoan’Andriamanitra irery anie ny Voninahitra
Mise à jour le Vendredi, 13 Mai 2016 20:04
>> Lutheran World Federation
>> Loterana Malagasy
>> Synode FLM-Europe
>> TOBY POURU
>> Feon'ny Filazantsara
Copyright : FLM Paris 2011 - Joomla,ThemZa .